Inethiwekhi yokuthengisa - iYantai Ishikawa yokuTywina iTekhnoloji Co., Ltd.
Emva kweminyaka emininzi yemizamo, i-YTSC ikulungele ukuqhuba uyilo kunye neemvavanyo ezihambelana ne-OEM. Iimveliso zamkelwe ngokubanzi kumacandelo anje ngezithuthi zorhwebo, izithuthi zabakhweli, iinqanawa, oomatshini ngokubanzi, ishishini lepetrokhemikhali kunye nesikhululo samandla obushushu.
Ukutywina iigaskethi, iinxalenye zerabha kunye namakhaka obushushu anikezelwa kwiinjini ezingaphezu kweenkampani ezingama-70 ezinje nge-FAW, i-DFM, iSAIC Motor, i-Weichai Power, i-Wuxi Power, i-SDEC, i-YC DIESEL, i-DEUTZ-i-Diesel Injini ye-Diesel, i-Huachai Power, i-SINOTRUC, i-GAC Motor . I-V12 yokutywina gasket (S1003030-46K cylinder gasket) efakwe kwimoto yovavanyo kaMongameli Hu Jintao kumsitho weSikhumbuzo sama-60 sikaZwelonke.
Amacwecwe okutywina e-Fibre amkelwe ngokubanzi kwimizi-mveliso ye-petrochemical kunye neenqanawa kwaye ikakhulu zinikezelwa kwi-QPEC, Daqing Petrochemical, Jilin Chemical Industry, GSI, CSSC, Bohai Ship-yard, njl. nakuMbindi Mpuma.
Amacwecwe e-glue-coating asetyenziswa ikakhulu kwimithombo ye-clamp, iisilencers, iipads, zaqhekeza, njl njl. Iimveliso ziya kwimarike yaphesheya kwaye ezinye zazo ziye zaphumelela imvume yabathengi.